I-oyile ehlikiweyo iBronze Igumbi lokuhlambela leSink Faucet
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / I-WOWOW-Ioyile eQinisekisiweyo yeBronzi eBasin yeSink Faucet
Wowow-I-Rubber yebronze IBhafu yokuGqobhoza ebanzi
ikaliwe 4.81 Kwi-5 esekelwe kuyo 16 amanqaku umthengi
(16 ncomo ngumthengi)
Uhlengahlengiso lwamanzi ngokulula
Yenza uyilo olulula, nolungelelwanisiweyo, isuntsu ikuvumela ukuba uhlengahlengise ngokulula zombini umthamo wamanzi kunye namaqondo obushushu ngeendlela zayo ezimbini zomnqamlezo.
Umsinga weAerated woCoceko lwemihla ngemihla
Ukuhambisa ukuya kufikelela kwiilitha ezi-1.5 ngomzuzu, isitofu sokuhlambela sinika umjelo ozinzileyo we-aerated, okwenza kube kufanelekile ukucocwa kwemihla ngemihla. Ispout ukuphakama, ikunika ukucaca okwaneleyo ngaphantsi kwesiporingi.
2320300ORB imiyalelo yokufaka
Ukusuka kwi-4 ukuya kwi-intshi ye-intshi ebanzi kwigumbi lokuhlambela 16ORB kwindawo yokufaka umngxuma emi-2320300, umgama uyahlengahlengiswa kwiimfuno zakho.
Ixabiso eliphantsi lesitshixo ekugqityweni okumnyama okugqityiweyo, uyilo oluphezulu lwesikwere esine-spout esifanelekileyo ekudaleni umhlobiso wesitayile sanamhlanje kunye nesitayile sokuhombisa.
Ifanela indlu yokurenta, i-condo entsha, i-single-floor, ikhaya leemoto, i-trailer yokuhamba kunye nosapho.
Ukuphathwa ngokuthe tye kuyilo lwe-ergonomics, ubungakanani obufanelekileyo obulungele ukulawulwa, ukukhululeka ukujika.
Ungayisebenzisa ngomzamo nje omncinci kwaye ngendlela elula.
Indlela yeManzi: Umjelo
Amanqaku Amanzi: Kuxutywe kushushu kunye nokubandayo
Uxinzelelo lwamanzi: Ubuncinci be-0.5 bar, i-1.0 bar icetyisiwe
Izinto eziphambili zomzimba: Ukwakha ibrass okuqinileyo
I-Valve: I-Ceramic Disc Cartridge
Izinto zokuphatha: Zinc-Alloy
Gqibezela: Ibronze yeBhotile yeoyile
Uhlobo loFakelo: I-Deck ekhwele
Inani leeNdawo ezifunekayo: 3
Ubungakanani beMax Deck: 1.38 ″
Amachaphaza ashushu kunye namanzi abandayo ayasuswa, unokufumana izibambo zokukhomba kulo naliphi na icala njengoko ufuna.
Isixhobo esikhethekileyo sokususa iAerator
Ukusebenza okuphezulu kunokuhambisa ukuhamba kakuhle, kungonga ngaphezulu kwe-50% yamanzi.
I-aerator iyachaphazeleka, ungayicoca okanye uyitshintshe ngokulula.
Kulula ukulawula umthamo wamanzi kunye namaqondo obushushu ngokuchanekileyo.
Uyilo lokujikeleza lwe-360-degree lokusetyenziswa ngokulula.
Qhagamshela uyilo olukhawulezileyo
Uyilo loqobo lwangempela loxhumano.
Kulula ukuyifakela ngokwakho ngaphandle kweplanga.
Iziqhagamshelo zivalwe ngokuqinileyo ngokusebenzisa ubuchwephesha, akukho kuvuza.
Isixhobo Esomeleleyo seBrass
Izinto zobhedu eziqinileyo zingcono kunenye intsimbi
Akukho sidingo sokukhathazeka malunga nokugqwala, iingxaki zodosi.
Izixhobo ezikumgangatho ophezulu, ukugcinwa lula, ukuzinza okuphezulu, ixesha elide ukusebenzisa ubomi.
SKU: 2320300ORB iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: isitya sokuxuba, imingxunya emithathu, Izibambo eziBini
12.5 x 10.1 x 3 intshi
Ndithandabuza kancinci ukuthenga le nto ngenxa yexabiso eliphantsi kakhulu. Bendihlala ndizithengela olu hlobo lweefompo kwiivenkile zoPhuculo lwasekhaya kwaye ndibhatale ubuncinci iidola ezingama-300 + nganye nganye. Emva kokuyifaka le kwigumbi lokuhlambela lam ndachukumiseka kakhulu kukusebenza kwayo. Lonke unxibelelwano lwalulubhedu kwaye zonke iigasketi zenziwe kakuhle kakhulu. Ukugqitywa kwentsimbi kubonakala ngathi kwenziwe kakuhle kakhulu. Ukufaka kwakulula kakhulu.
Ndiyalele ezi zinto kuba bezifana nezinye eDepho yasekhaya naseLowe ngesiqingatha seendleko. Ndiyithandile indlela abajongeka ngayo xa sele ifakiwe.
Usebenzise oku kwigumbi elingumgubo olungcono. Ndonwabe kakhulu, ngakumbi ngexabiso elihlawuliweyo. Ufike ukhuselekile. Uhlobo oluhle, ulungile kwaye ugqibile. Umbhobho ngokwawo uziva ubunzima bokukhanya obundenze ndabuza umgangatho, kodwa isebenza kakuhle. Amaqhina ashushu / abandayo ajika ngokutyibilikayo kwaye asebenze ngokufanelekileyo. Ikhithi yofakelo kunye nonxibelelwano olukhawulezayo lwenze ukufakela umoya. Andiqinisekanga nge-100% ukuba ndiza kuyibeka kwindawo enzima, efuna indawo kodwa ndazi into endiyaziyo, ndiza kuyithenga kwakhona.
Ukugqiba okuhle okubonakala kuhleli. Izibambo ziziva zomelele kwaye ijongeka endaweni kunye nayo yonke into esegumbini. Ixabiso elifanelekileyo, ngakumbi ngokubanzi. Coca ukufaka phezulu kwento entsha yamampunge. Qaphela idreyini iyenyuka phezulu / ezantsi ngokutyhala kwisimeli hayi ngokutyhala / ngokutsala ibar. Ndiyalithanda elo nqaku kuba ligcina ukujonga okucocekileyo kwetephu.
Ngexabiso lale faetet, ndonwabile ngokwenene ngokuthenga kwethu. Umyeni wam wayibeka kwitafile yethu ngaphambi kokuba sifake ikhabhathi ukuze ukufakwa kube lula. Inenkangeleko engakumbi yemizi-mveliso, kodwa ndiyayithanda. Kwakufakwe ngocoselelo ngononophelo endandithanda ukuqiniseka ukuba akukho nto iyakukrwempa.
Ndithengile ezimbini zezi kwaye ixabiso lendleko lilungile. Itephu yomelele kwaye yakhiwe kakuhle. Unxibelelwano lulungile kwaye andikaze ndibenangxaki yokuvuza. Kulula ukuyifaka, ijongeka intle kwaye kulula ukuyicoca. Ndingayincoma.
Ndonwabe kakhulu yile faucet. Ndifuna ukuhlaziya igumbi lethu lokuhlambela kwaye ndinebhajethi encinci. Ndiyithandile inkangeleko yoku kodwa ezinye ezinokuthelekiswa zaziyi- $ 100 +. Ndithenge le nto nge-whim esekwe kolunye uphononongo oluqinisekileyo kwaye ndonwabile ukuba ndenzile. Ndiceba ukuthenga enye ukuze ndihlaziye indlu yangasese elandelayo!
Ngokuqinisekileyo iimpompo ezimangalisayo. Kulula kakhulu ukuyifaka. Yimihla ngemihla kwaye intle. Inzima kwaye yenziwe kakuhle. Ngaba uya kuthenga iimveliso zabo kwakhona!
Ndijongene nompompo ongavumeli amanzi aneleyo ukuba adlule kuwo. Ndithenge le yombhobho ujikelezayo kwaye umahluko uyamangalisa. Yayilufakelo olulula kwaye ijongeka intle kwaye isebenza kakhulu kangangokuba eyona ibiza kakhulu endiyibuyisileyo. Kucetyiswa kakhulu!
Uthando olupheleleyo! Nantoni na enje evenkileni yayiyi-150 yeedola okanye nangaphezulu kwaye ayizanga nayo idreyini, oku kubonakala kumangalisa kwigumbi lam lokuhlambela! Kufanelekile yonke ipenny
Itephu entle! Kuza nayo yonke into yokufaka, kubandakanya i-1/2 ukuya ku-3/8 yokucinezelwa kwemibhobho efanelekileyo malunga nee-intshi ezili-15 ubude. Ixesha lokuqala khange ndifune ukuya evenkileni ukufumana ezinye iindawo!
Khange ndibenomdla wokuhlawula ikhulu leedola kwibhanti yokuhlambela kodwa bendifuna elungileyo.
I $ 80 le ibingcono kunokuba bendikade ndikulindele .. Kubonakala kubiza kakhulu, kusebenza kakuhle, ndonwabile ndithathe ithuba
Isisombululo sezoqoqosho kwigumbi lokuhlambela, uyilo lwangoku, izibambo ze-lever kunye nokungabikho kwefrill pop pop ngaphandle komdonga wokutsala.
Zithande ngokupheleleyo ezi mpompo! Ixabiso elinjalo kakhulu lemali. Kulula ukuyifaka ngokunjalo! Ayinakuhamba gwenxa kwezi.
Ndiyayithanda inkangeleko yetepu, ihleli nje incinci kum. Kulula ukuyifaka ndinqwenela ukuba ibincinci. Kodwa kufanelekile imali.
Le faucet ijongeka AMAZING kwigumbi lam lokuhlambela. Ngokuqinisekileyo ndiya ku-odola 2 ngaphezulu kwigumbi lokuhlambela londwendwe lwam !!
WOWOW Bathroom Sink faucet 4 Inch Centre ioyile yeoli ...